Fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny havokavoka - Proton any California
Therapy fitsaboana ny homamiadana
Miady amin'ny homamiadana Lung miaraka amin'ny famaritana mitovy amin'ny Laser
Ny teknolojia fanaraha-maso beam-panodinam-bolo any California Protons dia fomba iray marim-pototra tsara amin'ny fikarakarana ny homamiadan'ny havokavoka ao amin'ny havokavony izay ahafahan'ny dokotera mikendry an-tsitrapo ny havokavony amin'ny taratra avo lenta izay mety hiteraka famelana bebe kokoa amin'ny taratra X-ray.
Raha oharina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha kokoa, ny teknolojia scan-vakana ny pensilihazo dia manome ny fikarakarana taratra proton beam ho an'ny homamiadan'ny havokavony ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana fatratra. Azontsika atao ny mamely ny fivontosan'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fivontosana ary manamaivana ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe ho an'ny marary ny homamiadan'ny havokavoka izany satria ny havokavoka dia mipetraka eo akaikin'ny taova sy sela mahatsika tena be pitsiny sy manakiana, anisan'izany ny fo, esofagus ary tadina. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mahasoa ihany koa ho an'ny marary manana fihanaky ny havokavoka na aretina aretim-po.
Karazan'aretin'ny homamiadan'ny ratra
Ny homamiadana sela tsy madinika
Ny homamiadan'ny havokavoka sela
K homamiadana miverimberina sy metastatic voafantina
Fivontosana vondron-tsavony (thymoma, sarcoma)
Ahoana no fomba itondranay ny homamiadan'ny trondro?
Arovy ny fonao, ny esofagus, ny tadin'ny hazon-damosina ary ny taolana mahasalama
Hikazona ny fiainanao tsara mandritra ny fitsaboana amin'ny homamiadan'ny havokavoka
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana amin'ny fitsaboana, anisan'izany ny esophagitis sy pneumonitis
Tombontsoa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny voan'ny
Ny teknôlôjian'ny fandinihana ny vatan-tsamainty dia mifehy mivantana ny proton mba hametrahana ny tampon-tranon'i Bragg - ny fotoana nametrahany ny angovo faran'izy ireo indrindra - mivantana ao amin'ny fivontosan'ny havokavoka. Izany dia ahafahantsika mikarakara ireo fivontosana mihanaka be kokoa sy manova ny fatra ao anaty fivontosana.
Ny fitsaboana fitsaboana protonika ho an'ny homamiadan'ny havokavony dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara kokoa amin'ny taratra avo sy hozatra ny havokavony, ary mampihena ny fatra amin'ny sela mahaliana sy taova mihantona. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny fampihenana taratra amin'ny tavy mahasalama manodidina ny havokavoka marary dia mety hampihena ny fahasimban'ny havokavoka, ny fo, ny esofagus ary ny tadin'ny hazondamosina. Tena zava-dehibe izany satria ny fahasimbana amin'ireo firafitra mora tohina ireo dia mety hisy fiatraikany lehibe toy ny esophagitis sy pnemonite, ary mampihena ny kalitaon'ny fiainanao. Ny teknolojika koa dia mampihena ny taratra mankany amin'ny tsoka, izay mety hampihena ny havizanan'ny fitsaboana.
Betsaka ny marary mijaly noho ny aretim-po na aretim-po. Ny fiheverana ny tsipika marika manodinam-baravarana dia manamaivana ny fihanaky ny taratra amin'ireny faritra ireny ary manampy amin'ny fisorohana ny fiharatsiana ny fepetra ireo.
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fitsaboana proton dia mahomby toy ny taratra X-ray amin'ny fitsaboana ny homamiadan'ny havokavan'ny sela ary tsy mampihena ny vokadratsiny toy ny fihenan'ny havokavoka sy ny esophagus. Ny fandinihana dia mampiseho ny marary homamiadana sasany dia afaka mahazo fatra fitsaboana avo kokoa miaraka amin'ny fiantraikany amin'ny taratra lavitra kokoa.
Tsy toy ny haitao taloha, ny drafitra fitsaboana fitsaboana homamiadan'ny havokavoka dia azo ampidirina ao anaty solosaina ary vita ao anatin'ny iray minitra. Ny fitsaboana ihany koa dia tsy misy dikany ary azo alain-tahaka ka ahafahan'ny marary miverina haingana kokoa amin'ny asany isan'andro.
Therapy fitsaboana ny proton
Mety ho anao ve ny homamiadana?
Eo ho eo amin'ny 20 isan-jaton'ny havokavony ihany no azo tsaboina amin'ny fandidiana; ny ambiny dia matetika mitaky ny fatran'ny taratra ambony na ny fitambaran'ny taratra ary ny fitsaboana hafa. Ny safidy fitsaboana koa dia voakasiky ny karazan'aretin'ny havokavoka, taona, ny fahasalamana ankapobeny ary ny filan'ny tena manokana.
Ny fitsaboana proton dia matetika no fomba tsara indrindra hitsaboana azy fivontosana miverimberina amin'ireo faritra izay efa voatsabo tamin'ny fitsaboana fitsaboana mahazatra.
Vokatry ny fitsaboana ny kanseran'ny havokavoka ary ny vokany maharitra
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'ny taratra X-ray mahazatra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mety hampidi-doza toy ny esophagitis sy pneumonitis noho ny fahasimban'ny taratra amin'ny esofagus sy ny havokavoka. Izy io koa dia manome ny mety hisian'ny fihenan-drà mety ho an'ny homamiadana faharoa any aoriana any noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy taova mahasalama manodidina anao.
Fikarohana fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny voan'ny
Fantatra tany am-boalohany momba ny poizin'ny fitsaboana proton beam miaraka amin'ny simoteraly miaraka amin'ny homamiadana tsy sela
Ny fitsaboana radiation dia manolotra ny fihenan'ny havokavony sy ny taola-mihena ho an'ny marary mahazo fitsaboana aretim-pisondrona ho an'ny sehatra tsy azo tsapain-tanana iii tsy homamiadana havokavoka: fandinihana dosimétika
Ny fitsaboana Protonie miaraka amin'ny chimioteramizao mitovy amin'ny homamiadan'ny havokavoka sela kely: teknika sy valiny voalohany
Fampitahana anaty-silico ny proton beam sy IMRT ho an'ny radioteraky ny postoperative ao amin'ny sehatra IIIA tsy homamiadana sela kely
Ny fanombanana klinika ny proton radiotherapy amin'ny homamiadan'ny havokavon'ny sela
Fampitahana ny habetsaky ny fatra amin'ny radioteran'ny proton sy ny radioteram-batana stereotactic ho an'ny homamiadan'ny havokavon'ny sela
Ny fitsaboana ny tsiranoka taratra protofototra hypofractionated hypofractionated beam dia mahomby ary mahomby amin'ny homamiadana afovoan'ny sela sy aforitra tsy miova kely: vokatry ny zava-niainana 12 taona tao amin'ny Loma Linda University Medical Center
Ny fitsaboana ny beam-bohitra avo lenta momba ny homamiadan'ny havokavon'ny sela
Ny fampihenana ny fatran'ny vatan'ny tavy mahazatra amin'ny alàlan'ny radioterika proton raha ampitahaina amin'ny conformal 3-D na IMRT amin'ny sehatra I na ny dingana III tsy homamiadana sela kely